देश डुब्नै आँट्यो : आफैचाहिँ चार महिनामा छ पटक विदेश ! - देश डुब्नै आँट्यो : आफैचाहिँ चार महिनामा छ पटक विदेश !
देश डुब्नै आँट्यो : आफैचाहिँ चार महिनामा छ पटक विदेश !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १6 आश्विन, 01:32:36 AM
काठमाडौ । सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा विरोध जनाइरहेका छन्। संसद्मा पनि उनले भने, देश डुब्नै आँट्यो। सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफैचाहिँ चार महिनामा छ पटक विदेश पुगिसके।
नेकपाले प्रदेश नेतृत्व टुंग्याउँदा पनि नेपाल विदेशमै थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालको ‘विदेश मोह बढेको’ भन्दै पार्टीभित्र आलोचना सुरु भएको छ। नेकपाका एक नेताले भने, ‘संकटको घडीमा विदेश किन जाने ? महिनामा कति दिन विदेश बस्ने ? भ्रमणका उपलब्धि के हुने ? त्यसबाट मुलुक र पार्टीले के कति इज्जत-प्रतिष्ठा कमायो ? यसबारेमा अब नेपालले सोच्नुपर्छ।’
नेपालले पार्टीभित्र प्रश्न मात्रै उठाएको भन्दै उनले भने, ‘पार्टीमा बहस उठाउने मात्रै होइन, समाधानको खोजीमा पनि नेपाल गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ।’ नेपाल आइतबार मात्रै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा निस्केका छन्।
२०७५, १6 आश्विन, 01:32:36 AM
विदेश जाने आउनेका लागि सुधारिदै अध्यागमन विभाग !
विदेश जाँदा १५ सय डलरमात्रै लिन पाइने !